दोहोरो भनिए पनि ‘मुठभेड’ शब्दमाथि आम नागरिकको जहिल्यै संशय रहँदै आएको छ । २०५२ देखि २०६२ बीचमा सत्तापक्षबाट गरिएका अधिकांश हत्या प्रकरण गैरन्यायिक थिए, जसमा एउटा साझा पदावली हरेकपल्ट दोहोरिन्थ्यो, ‘फलानो ठाउँमा दोहोरो भिडन्त हुँदा यति जना आतंककारी हताहत भए’ ! यतिखेर उस्तै अर्थ दिने, उस्तै प्रकृतिका घटना दोहोरिइरहँदा आशंका उब्जेको छ । के सरकार यही तरिकाले ‘आतंकवाद’ सँग भिड्न खोजिरहेको हो ?
विप्लव लगायतको नेकपाको नेतृत्वले पनि इतिहासलाई नयाँ विन्दुबाट नयाँ शैलीले सम्बोधन गर्ने कि सर्वसाधारणलाई आतंकित पारेर इतिहासको प्रहसन दोहोर्‍याई मात्रै रहने ? एउटा आम नागरिकका रूपमा हेर्दा विस्फोटमा मारिने होऊन् या मुठभेडको कल्पित रूपकमा सरकारी षड्यन्त्रले मारिने होऊन्, यो देशमा हत्याको ताण्डव तुरुन्तै रोकिनुपर्छ । सकारात्मक परिणाम दिने वार्ताका लागि दुवै पक्ष तयार हुनुपर्छ । प्रकाशित : असार १०, २०७६ ०७:५२
निःसन्देह यी दुई शक्तिबाहेक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र पछिल्लो जनक्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा गर्ने कुनै शक्ति नेपालमा तत्काल छैन, न त निकट भविष्यमै आउने सम्भावना छ । यसर्थ प्रतिपक्षको अर्को निर्वाचनसम्म सत्ताबाहिर बस्ने धैर्य र सत्तापक्षको प्रतिपक्षप्रति अधिकतम लचकताका साथ प्राप्त प्रचण्ड जनमतको जनपक्षीय उपयोग नै अहिलेको संवैधानिक दायित्व हो । यो दायित्वको पालना स्वस्थ र मर्यादित संसदीय अभ्यासमार्फत नै गरिनुपर्छ ।